Izakhelo 5.62 Yazisa ngeTotali eyi-172 yeeNguqu kunye neeLungiso | Ubunlog
Iinkqubo-sikhokelo 5.62 ngoku ziyafumaneka, yazisa iinguqu ezili-172 kunye nokulungiswa
I-KDE ngumphuhlisi woluntu onoxanduva lwesoftware esemgangathweni, phakathi kwayo sineenkqubo zokusebenza zeKubuntu kunye ne-KDE. Ikwangabo abagcina iPlasma, yenye yezona ndawo zibalaseleyo zemizobo ezikhoyo kwiLinux, ii-KDE Izicelo kunye nangaphezulu kwamathala eencwadi angama-70 anokuzalisa iphakheji. Namhlanje, ngaphezulu kwenyanga emva kwenguqulelo yangaphambili, uLuntu lwe KDE lukhuphe uhlaziyo lwala mathala eencwadi, ngakumbi i KDE Inkqubo-sikhokelo 5.62.
Inkqubo-sikhokelo 5.62 ifikile nge iinguqu ezingama-172 zizonke Ukusasazeka ngaphezulu kwecandelo le-KDE Attica, i-Baloo, ii-Breeze Icons, iiModyuli ze-CMake ezongezelelweyo, ii-KActivitiesStats, i-KActivities, i-KArchive, i-KCompletion, i-KConfig, i-KConfigWidgets, i-KCoreAddons, i-KCrash, i-KDBusAddons, i-KDeclarative, i-KDesignDlugin , KItemModels, KItemViews, KNotification, KPeople, KPlotting, KRunner, KTextEditor, KTextWidgets, KUnitConversino, wefayile Framework, KWayland, KWidgetsAddon, KWindowGagerSystem, KWindowManagerSystem, KWidgetsAddon, KWindowGGetty Framework, PlasmaManridgeSystem, KWidgetsAddon, PlasmaManagerSystem, KXMLGentridgeManridgeSystem, KWidgetsAddon, PlasmaGentaxManridgeSystem, KWidgetsAddon, QPeople , SonridgeManridgeSystem, KWidgetsAddon, QPeople, KPlotting, NetworkManager, QGentaxMindexManager, QPeople, KWidgetsAddon.
1 Amagqabantshintshi eSakhelo 5.62
2 Ikhowudi yakho ngoku iyafumaneka, kungekudala kwi-Discover
Amagqabantshintshi eSakhelo 5.62
Uluhlu olupheleleyo lwezinto ezintsha kwiiNkqubo-sikhokelo 5.62 ziyafumaneka kwi esi sixhobo, Kodwa ezinye zazo zachazwa ngcono kwizithuba ezivela kwi-KDE yokuSebenza kunye nephulo lokuvelisa ngale ndlela:
Hlehlisa xa ulahle into kwidesktop isebenza kwakhona.
IDolphin ayisavali xa kukopishwa inani elikhulu leefayile kwindawo esele inephakeji yezo fayile kwaye sikhetha ukutsiba ifayile esele ikho.
Iinguqulelo ezinkulu zenkunkuma ngoku zinokubonakala ngathi zinkunkuma.
Iinguqulelo ezincinci ze-monochrome zoMdaka ngoku zibonakala zigcwele endaweni ebomvu.
Ukukhetha inkunkuma ngoku kubonisa isicatshulwa esifanelekileyo kunye ne icon kwiphaneli yolwazi yeDolphin.
I icon yezaziso ngoku isebenzisa istayile senkcazo njengazo zonke ii icon ze systray.
Iimpawu zomhleli okhethekileyo wemvume ngoku ziyafana nee icon kumxholo osebenzayo, ke zijongeka ngcono kwimowudi ye-DPI nakuzo zonke izikimu zemibala.
Akusekho ukuxhoma xa uzama ukubhala ngaphezulu ifayile esele ikho kwiseva ye-FTP.
Akusenakwenzeka ukuba urhuqe imenyu ye-Qobo ye-QML kwisakhelo sayo.
Kwiibhokisi zebhokisi yencoko evulekileyo / yokugcina, kunye nezinye izimvo zefayile ekwi-intanethi, akusenakwenzeka ukuzama ngokungenamsebenzi ukwenza ifayile entsha okanye ifolda ngaphezulu kwefayile esele ikho (iiNkqubo-sikhokelo 5.62)
Amanye amaqhosha kwiiwijethi ezithile zePlasma (njengeqhosha leMojethi yoqwalaselo lwemozulu) azisekho ngokuhlekisayo.
Iifayile zeFictionbook ngoku zineempawu zazo.
Iimpawu ezide kwiDolphin kunye neefayile zencoko yababini ngoku zikhutshiwe embindini endaweni yokuba ekugqibeleni ukuze ukwandiswa kwegama lefayile kuhlala kubonakala.
Ikhowudi yakho ngoku iyafumaneka, kungekudala kwi-Discover
Isakhelo esingu-5.62 ngoku siyafumaneka kwifom yekhowudi, kodwa izakuvela kungekudala njengohlaziyo kwiDisco.
Isakhelo 5.61 sifika sisombulula ubungozi bePlasma nge .desktop kunye neefayile zolawulo
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » Iinkqubo-sikhokelo 5.62 ngoku ziyafumaneka, yazisa iinguqu ezili-172 kunye nokulungiswa
I-WSL: Uyifaka njani kwaye uyisebenzise inkqubo esezantsi Ubuntu kwi Windows 10
Kutheni njengomsebenzisi we KDE ndisebenzise iThunderbird kwakhona [Uluvo]